Dib u eeg LG G2, casriga oo leh 5,2 inji iyo Snapdragon 800 | War gadget
Dib u eeg LG G2, casriga ah oo leh 5,2 inji iyo Snapdragon 800
Maanta waa maalintii shirkadda LG ay soo bandhigtay terminalkeeda cusub ee G2 ee ku yaal Spain, ku-xigeenkii Optimus G taasi waxay shaki la'aan muujineysaa boodbood tayo leh oo muhiim u ah qalabka, isticmaalka iyo falsafadda sumadda.
Waxaa jira cibaaro badan oo ay LG G2 sababtaas awgeed, waxaan uga wada hadlaynaa dhammaantood tartiib tartiib.
3 Nidaamka hawlgalka
LG G2 waxaa lagu gartaa inuu yahay mid ka mid ah boosteejooyinka ugu horreeya ee suuqa ee ku xiraya barxadda cusub Snapdragon 800 ka yimid Qualcomm. Waxaan ka hadleynaa processor afar geesle ah oo ka shaqeeya 2,26Ghz, bahal dhab ah maanta oo keena dheecaan xad dhaaf ah xaalad kasta.
La socda Snapdragon 800 waxaan leenahay wadar ah 2GB oo RAM ahIn ka badan oo ku filan si loo awoodo in lagu helo liis-garayn wanaagsan ee codsiyada furan iyada oo aan wax-u-dhimin waxqabadka ugu yaraan.
Ciyaartoydu waxay heli doonaan LG G2 oo aad u soo jiidasho leh waana taas qaybta garaafka, shirkadda ayaa dooratay GPU Adreno 330 Xildhibaan taas oo sifiican u qabata cayaaraha aadka u baahan sida Real Racing 3 oo si dhib yar u dhaafta bartilmaameedka 3DMark.
Awooda, LG G2 waxay leedahay awood badan iyo midkeeda 5,2 inch screen wuxuu noo ogolaanayaa inaan helno dhamaan casiirkiisa. Cabirkeedu waxyar buu koray si uu u gaaro 138,5 x 70,9 x 8,9 milimitir, wax caadi ah iyada oo la tixgelinayo cabbirka muujinta, hase yeeshe, si looga hortago inay si xad dhaaf ah u koraan, LG wuxuu yareeyay dhinacyada hoose ugu yaraan. Oo ku xeeran guddiga LCD kaas oo habka, waa IPS iyo HD buuxa (423ppi).
Shaashaddan weyn ee ku jirta jirka yar ee casriga ahi waa wax aannu doonaynay muddo dheer taasna waa la mahadiyey markay tahay LG G2 oo jeebkayaga ku jira. Waa inaan ku idhaahdaa qeexitaan, isbarbardhig, iyo xaglo daawasho, shaashadda taleefannadan casriga ahi waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican in aan maanta heli karno.
La kamaradda dambe waa 13 megapixels waxayna noo ogolaaneysaa inaan ku duubno fiidiyowga 1080p iyo 60fps, dhinaca hore wuxuu hoos u dhigayaa xallinta ilaa 2,1 megapixels. Kaamirada gadaal waxay ka kooban tahay 9-dhibic diiradda nidaamka, xasilinta indhaha, f2.4 furitaanka focal iyo cabirka cabirka 1/3.
Codsiga kaamerada ee LG G2 keeno ayaa noo ogolaanaya inaan wax hagaajino xoogaa xuduudaha sawirka (ISO, dheelitirka cad, dhalaalka ...), ku dabool saamaynta ama qaabab kala duwan (qarxis, jaangooyo, HDR, ...) oo sawir ah. Fursado badan ayaa looga faa'iideysan karaa kamarad si wanaagsan ugu shaqeysa deegaanno dhalaalaya oo u hoggaansamaysa gudcurka iyada oo ay ugu wacan tahay laydhkeeda.
Heerka keydinta waxaan ka helnaa 16GB ama 32GB Waxay kuxirantahay nooca aan iibsano, taasi waa, majiro booska lagu dhejiyo kaararka microSD.
Ugu dambeyntii, LG G2 wuxuu leeyahay a 3000 mAh batari gudaha ah taasi waxay na siin doontaa ismaamul ku dhow laba maalmood oo la isticmaalo iyadoo kuxiran codsiyada aan wadno. Imtixaanadayda waxaan ku guuleystey in aan ka badnaado 48 saacadood dhibaato la'aan sidaa darteed tan aad baa looga mahadceliyaa terminal sidan u awood badan.
Naqshadaynta LG G2 waa aad u fudud waana shaki la’aan calaamadeysan shaashadeeda weyn. Sidii aan horeyba u soo sheegnay, cidhifyada dhinaca ayaa loo hayaa ugu yaraan iyo badhannada Android ee u heellan waxay qaataan qayb yar oo shaashadda ah. Dhinaca hore waxaan kaliya ku haynaa astaanta astaanta iyo ku hadalka dhageysiga oo midab qalin ah u leh cunsurro ka soo muuqda madowga. Waxa kale oo jira flash yar LED dusha sare taasi waxay ina tusi doontaa ogeysiis marka aan helno.
Gadaalku waa midka laga yaabo inuu war badan hayo. Waxay soo bandhigaysaa a naqshad yar oo qalooca at dhamaadka si ay ula qabsadaan qaabka gacantayada oo markaa awood u leh inay u qabtaan hab raaxo leh.
Faahfaahin kale oo xiiso leh ayaa ah in LG G2 uu leeyahay badhanka awoodda iyo badhanka mugga wax yar uun ka hooseeya kamaradda. Waa faahfaahin xiiso leh laakiin waxay nooga baahan doontaa wakhti yar oo aan kula qabsanno si looga fogaado waallida u aadida aagagga dambe. Badhanka awoodda ayaa wax yar ka soo baxa badhanka mugga si aad si fudud ugu cadaadiso, xitaa sidaas, in ka badan hal jeer ayaan khaladaad sameyn doonnaa illaa aan ka helno booskiisa saxda ah.
Daboolka dambe wuxuu ka kooban yahay a dhammaystiran oo dhalaalaya inkasta oo haddii aan si dhow u eegno, jeexdin dadban loo arko taabasho gooni ah. Qeybta hoose waa isku xiraha microUSB (oo ku habboon isticmaalka docks-ka) dhinacana waxaa ku yaal saxaarad la gelinayo microSIM.
LG G2 ayaa la yimaada Android 4.2.2 Jelly Bean lagu rakibay sidii caadiga ahayd. Shirkaddu waxay ballan-qaad u samaysay adeegsadayaasha si cusbooneysiintu u gaarto isticmaaleyaasha waqtiga ugu yar ee suurtagalka ah, sidaa darteed kuwa ka shakiya ayaa nasan kara.
Sidii aan horeyba u sheegnay, dheecaanka nidaamka qalliinka waa mid la yaab leh sidoo kale, LG waxay leedahay lagu qaabeeyey qaar ka mid ah codsiyadaada xiiso leh sida 'QuickMemo' oo noo oggolaaneysa inaan si toos ah u qaadan karno qoraallada isla markaana aan ugu ilaalino is-dhexgalka Android haddii loo baahdo. Waxaan sidoo kale daari karnaa shaashadda weyn ee 5,2-inji adigoo labo-gujinaya meel madhan ama barta xaaladda iyo sidaas darteed, siro badan oo badan oo qarsoodi ah oo aan ogaan doonno markay daqiiqaduhu socdaan.
Qiimaha LG G2 16GB waa 599 euros inta lagu gudajiro furitaanka oo hada si bilaash ah ayaa lagu iibsan karaa.
Macluumaad dheeraad ah - Waxaan tijaabinay LG Optimus G
Xiriir - LG G2
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Telefoon » Mobiles » Dib u eeg LG G2, casriga ah oo leh 5,2 inji iyo Snapdragon 800
Kubadda cagta: FIFA 14 iyo PES 2014